Rurefu rwizi munyika: gakava riri pakati peNile neAmazon | Absolut Kufamba
Rwizi rurefu kwazvo pasi rose pamwe harusi iyo yatinofunga tese patinobvunzwa mubvunzo iwoyo. Kana, zvirinani, handiyo yega. Nekuti sainzi haapedze kubvuma nezvazvo, kunyangwe nezve nzira dzinofanira kuteverwa kuitora.
Chokwadi, kana iwe uchizotaura kuti nderupi rwizi rurefu kwazvo pasi, iwe unganongedzera Amazon. Uye unenge usina kukanganisa zvachose. Nekudaro, chikamu chakanaka chevanyanzvi, icho chakanangana nehumwe hunhu, chingakuudze kuti ndicho Nile. Chinhu chinonyanya kufarira ndechekuti isu tese tingave takarurama. Zvinoenderana nematanho atinozvitsigira paari.
1 Maitiro ekusarudza kuti nderupi rwizi rurefu pasi rose
2 Rwizi rwaNire, rwakareba kupfuura rwese pasi nekureba
2.1 Gungwa reVictoria
2.2 Dziva reAswan
2.3 Guta rekare reMeroe
2.4 Mupata weMadzimambo
3 IAmazon, rwizi rukuru pasi rese nekuyerera kwemvura
3.1 Iyo Amazon
3.2 Iquitos, iyo Peruvia maAmazon
3.3 Manaus, guta guru reAmazonas
3.4 Belém, kupinda kuAmazon
Maitiro ekusarudza kuti nderupi rwizi rurefu pasi rose
A priori, zvingaite senge zviri nyore kumisikidza kukura kwerwizi. Zvingave zvakakwana kutora poindi yayo yekuzvarwa uye muromo wayo uye kuyera chinhambwe. Nekudaro, hazvisi kunyange nyore kumisikidza iyo miganho yemuviri. kuvapo mitero inobatana kugadzira chiteshi chimwe chete. Naizvozvo, zvinonetsa kuratidza chaipo panotangira rwizi.
Uye zvakare, nepo dzimwe nyanzvi dzichitsamira pamutsetse we kureba, vamwe vanozviita nekutarisa kuyerera kwayo. Ndokunge, muma cubic metres emvura ayo ainoburitsa mugungwa. Pamwechete, kana iri yekusimbisa kuti nderupi rwizi rwakareba kupfuura mamwe ese pasi, nzira yekutanga inoita senge yakavimbika. Nekudaro, sainzi inobvuma zvese zviri zviviri.
Naizvozvo, zvakanakisa zvatingaite kukupa iwe data rese zvine hukama nenzizi mbiri dzataurwa kuti iwe ugone kuumba yako pfungwa. Uye, sezvinei, sezvo isu tichiita nezvekufamba mune yedu dandemutande, isu tinokuratidza dzimwe nzvimbo dzakanakisa dzavanopfuura nadzo.
Rwizi rwaNire, rwakareba kupfuura rwese pasi nekureba
Sezvatakakuudza kare, nzvimbo yekuzvarwa kwaNire haina kujeka. Zvinozivikanwa kuita saizvozvo mu kumadokero tanzania uye nyanzvi zhinji dzinoisa mavambo acho mu gungwa victoria. Asi sezvo mvura yedziva iri inopihwa nenzizi, kune masayendisiti anowana panobva rwizi muna Kagera Rwizi, mutero wayo wakakura kwazvo.
Dambudziko iri rakakodzera nekuti, muchiitiko chekutanga, rwizi rukuru rwemu Africa rwainge rwakareba Makiromita 6650. Nekudaro, mune yechipiri, ndiko kuti, kana iyo Kagera ikatorwa senzvimbo yekuberekwa, yaizofamba Makiromita 6853.
Kupedzisa kuomesa zvinhu, iri rwizi colossus rine matavi maviri. Chekutanga ndiko kufona White Nile, ane nyika yekuzvarwa yaizova Rwanda uye kuti yaizoyambuka nzvimbo yeGreat Lakes. Kune chikamu chayo, yechipiri yaizove iyo Bhuruu Nile, iyo inoberekerwa mu lake tana, chikuru pane Ethiopia, uye inopfuura Sudan kujoina yekutanga padyo neguta guru renyika ino, Khartoum.
Chekupedzisira, inodurura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweGungwa reMediterranean ichiumba izvo zvinonzi Nile Delta mushure mekufamba nenyika gumi. Asi pamusoro pezvo, rwizi rwemuAfrica rune kuyerera kushoma pane iyo Amazon. Izvi zvinopa avhareji yemamirimita mazana maviri ezviuru kuAtlantic Ocean, nepo Rwizi rweNile rwakatakura huwandu hwemvura makumi matanhatu zvakapetwa. Uye iyo Amazon zvakare yakafara, nekuti mukutambanuka kwayo kwakakura inosvika makiromita gumi nerimwe mukufara.
Kune rimwe divi, sekukuvimbisa kwatainge taita, tichaenda kukuyambira imwe yeiyo nzvimbo dzakanaka kwazvo kuti iwe unogona kushanyira pamahombekombe erwizi rweNile.
Iine angangoita zviuru makumi manomwe zvemakiromita, ndiro dziva rechipiri pakukura pasirese Superior, mu Kanadha. Mahombekombe ayo anosanganisira marudzi matatu: Tanzania, Uganda y Kenya uye rinowana zita rayo kubva kuna mambokadzi England kukunda.
Nekuwedzera kwakadai, zvine musoro kuti ine zvishamiso zvepanyama. Kuti ndikupe muenzaniso, isu tichataura iyo Murchison Falls kana Kabalega, izvo zviri zveUganda uye zvakapa kukwira kune paki yenyika. Iwo ari chaizvo seti yemapopoma makuru matatu anosvika pakakwirira makumi mana nematatu emamita kukwirira.
Kunyangwe hachisi chivakwa chechisikigo, tiri kutaura nezve iri dhamu nekuda kwekukosha kwaro kukuru kune chiteshi cheNire Chaizvoizvo, rakaumbwa nemadhamu maviri, yakakwira neyakaderera. Asi chinonyanya kushamisa ndechekutanga, chakavakwa mumaXNUMX.
Iri ibasa rakakura reinjiniya rakaurayiwa kudzivirira rwizi kubva pakuzadza. Hukuru hwayo saizi inokupa iwe pfungwa yechokwadi iyo inoyera kusvika makiromita mana pakureba y anenge zana negumi kureba. Kana iri yekukora kwechigadziko chayo, ndizvo inenge kiromita.
Zvekuti zvirege kurasika, zviyeuchidzo zvakawanda zvaive munzvimbo iyi zvaifanira kufambiswa basa risati raitwa. Pakati pavo, iyo Tembere yemadhodhi, akaendeswa kuMadrid. Asi zvakare avo vaRamses II naDendur, akaendeswa kuKhartoum neNew York zvichiteerana.
Guta rekare reMeroe
Inowanikwa mu Sudan, raive guta guru re Humambo hweKush, mumwe wevaviri vakagadzira yekare Nubia. Kuvapo kwayo kwakadzokera muzana ramakore rechinomwe BC, asi rakaparadzwa kuma350 AD. Nekudaro, zvisaririra zvemadziro zvakachengetedzwa, iyo Royal Palace, the tembere huru yaAmun nevamwe vadiki. Izvo hazvishamise senzvimbo dzeIjipita dzatichataura nezvadzo zvinotevera, asi iine hukuru hwekuchera matongo.
Zvakare kumahombekombe erwizi rweNire kune mamwe emamwe matombo akakosha pasi rose: eaya ekare eIjipita. Pakati peaya, iwo ari muMupata weMadzimambo anomira, ayo anozoita chimiro ne Archaic thebes yakatarwa set Nhaka Yenyika.
Mupata unoumbwa nemakuva emapharao akasiyana siyana eiyo New Kingdom uye padyo navo iwo akaisvonaka. tembere dzeLuxor neKarnak, pamwe neizvo zvinonzi Mupata weQueens, nemakuva aya akacherwa mumatombo. Pasina kupokana, ndeimwe yeakakurisa ensembles pamahombekombe eNairi, kwaunogona kuona zvimwe zvakawanda zvinoshamisa, asi ikozvino tava kuzotarisa kuAmazon.
IAmazon, rwizi rukuru pasi rese nekuyerera kwemvura
Kune chikamu chayo, iyo Amazon ipfupi zvishoma kupfuura iyo Nile, asi kureba kwayo kune zvakare kukakavara. Ivo hydrographic cartographer ivo pachavo havabvumirani.
Zvinoenderana neUnited States National Park Service, iyo Amazon ine urefu hwe Makiromita 6400. Nekudaro, iyo Brazilian Institute of Geography uye Statistics yakaburitsa chidzidzo makore akati wandei apfuura umo yakati rwizi rukuru urwu rwunotangira kumaodzanyemba kwePeru kwete kuchamhembe, sekufungidzirwa kusvika ipapo. Nezvo, iyo Amazon yakawana murefu kusvika kuNairi. Asi gakava iri richiri kurarama uye masayendisiti mazhinji achiri kufunga nezverwizi rweAfrica zvakareba.
Chero zvazvingaitika, kana pachinzvimbo chehurefu kuyerera kana hupamhi zvichitorwa sechiyero, Amazon inokunda Rwizi rweNile zvakare. avhareji yemamirimita mazana maviri nemazana maviri pasekondi. Uye, maererano nehupamhi, maAmazon anoyera muzvikamu zvawo zvikuru Makiromita 11. Mune mamwe mazwi, imwe yacho hainyatso kuoneka kubva kumahombekombe.
Kune rimwe divi, sezvatakaita neNairi, tiri kuzokuratidza zvimwe zve nzvimbo dzakanaka kwazvo iyo iwe yaunogona kuona mubheseni rerwizi rukuru rweSouth America.
Kuwanda kwemvura inotakurwa nerwizi kunonyanya kukonzera chokwadi chekuti mabhanga ayo ndiwo musha wesango hombe pasi rose rinonzi Amazon. Ipapu rechokwadi repasi uye rine zvisingaverengeki kukosha kwezvakatipoteredza zvese nekuda kwechikonzero ichi uye nekuti ine hupfumi hwakawanda hwemiti nemhuka.
Kunyangwe chiri chikamu che Zvinomwe zvakasikwa Zvishamiso zveNyikaNehurombo, iyo ecosystem yeAmazon yanga iri munjodzi kwemakore nekuda kwechiitiko cheakakura matanda multinationals uye nezvimwe zvikonzero.
Iquitos, iyo Peruvia maAmazon
Iri ndiro guta hombe muAmazonese yePeruvia uye rakagadzirira kugamuchira vafambi. Nehurombo, yaive imwe yenzvimbo huru dzekufona Rubber fever izvo zvakaparadza nzvimbo zhinji.
Mariri unogona kushanyira akanaka Cathedral, chishamiso cheNeo-Gothic chakavakwa pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Uye zvakare iyo Casa del Fierro, Cohen uye Moreypamwe chete nechekare Ihotel Hotel, anoshamisa manyorerwo art deco. Iyo Main Square, uko iwe kwaunogona kuona iyo Obelisk kune iyo Magamba.
Manaus, guta guru reAmazonas
Isu tinozvibvumira kutamba uku pamashoko kunyangwe guta iri, zvine musoro, risiri iro guta guru reAmazon rainforest rose, asi yenyika yeBrazil Amazon. Muchokwadi, iri pakati pesango uye zita rayo mutero uyo vavaki vechiPutukezi vakagadzira maManaus maIndia, akabva kwairi.
Nzvimbo yaro yetsinga ndiyo San Sebastian Square, iko kupi kunokosha uye kunoshamisa Amazonas Theater. Isu tinokukurudzirawo kuti ushanyire nzvimbo ine nhoroondo, iine dzimba dzayo dzakanaka dzinovakwa panguva yeRubber Rush; iyo Adolpho Lisbon musika, nemakore anopfuura zana enhoroondo, uye Cultural Center yeVanhu veAmazon, inoyevedza mizumiyamu pamusoro pemadzinza aigara musango rakakura kubva panguva dzekare.
Amazonas Theatre, muManaus
Belém, kupinda kuAmazon
Iri guta reBrazil rinoonekwa seimwe yepamusoro magedhi kuAmazon, sezvo iri pamuromo perwizi pachayo. Iro zvakare guta guru redunhu reBrazil re Pará uye rine guta rekare rizere nedzimba dzehumambo nemamuseum.
Ivo zvakare vanosimbisa iyo Catedral Metropolitana, a classicist jewel, uye iyo Nhare yaIshe Santo Cristo de Presépio de Belém. Mukuwedzera, iyo Ver-o-Peso musika inokutendera iwe kunyudza iwe muhupenyu hwezuva nezuva hweguta uye Margal de las Garzas Park Inokuratidza mazana emarudzi eshiri dzemumvura. Pakupedzisira, usakanganwa kushanyira iyo Rodrígues Alves Botanical Bindu, rakafuridzirwa neBois de Boulogne ye Paris marongero ayo, asi nemhando dzakasiyana dzemaruva.
Mukupedzisa uye kudzokera kukakavara nezve rwizi rurefu kwazvo pasirese, isu tichakuudza kuti, nekureba ndiko Nile. Asi, nevhoriyamu, iyo Amazon yaizobvuta zita racho. Chero zvazvingaitika, vese vane pamabhangi avo zvishamiso zvakawanda kukupa iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Yakareba rwizi munyika